काठमाडौं, ६ बैसाख । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको भातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघ जन्मेको आज ४९ वर्ष भएको छ । यस अवसरमा नेविसंघले आज देशभर विभिन्न कार्यक्रम गरी स्थापनाको स्वर्ण जयन्ती मनाउन लागेको छ । विसं २०२७ वैशाख ६ गते काठमाडौंंको स्वयम्भूस्थित सत्तलमा नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईको प्रमुख आतिथ्यमा नेविसंघको स्थापना भएको थियो । स्वर्ण […]
काठमाडौं, ५ बैसाख । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले नागरिकको मर्मअनुसार काम गर्ने एक्लो पार्टी काँग्रेस मात्रै भएकाे दावी गरेका छन् । दुई तिहाइको कम्युनिष्ट सरकारबाट नागरिक आजित भइसकेको उनकाे तर्क छ । नेपाल राष्ट्रिय मगर संघ केन्द्रीय समितिद्वारा आयोजित सुदूरपश्चिम प्रदेशस्तरीय भेलालाई कैलालीको धनगढीमा सम्बोधनका क्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् । […]
काठमाडौं, २६ चैत – सत्तारूढ दल नेकपाकाे ३ नं. प्रदेश संगठन कमिटीले बारा पर्सा जिल्लामा अाएकाे ज्यानमारा अाँधी टाेर्नाडाेबाट पीडितलाई राहतस्वरूप नगद र जिन्सी सहयाेग हस्तान्तरण गरेकाे छ । प्रदेश ३ का ईन्चार्ज अष्टलक्ष्मी शाक्यकाे नेतृत्वमा गएको टाेलीले नगद १४ लाख ७० हजार तथा विभित्र जिन्सी सामग्री पीडितलाई हस्तान्तरण गरेकाे अध्यक्ष नारायण दाहालले जानकारी गराउनुभएकाे […]
काठमाडौं , २५ चैत – नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (क्रान्तिकारी) का महासचिव मोहन वैद्यले सत्ता बाहिर रहेका कम्युनिस्ट पार्टीलाई एकीकरण गरेर बृहत् पार्टी बनाउन पहल गर्ने बताएका छन् । देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चाको प्रथम अधिवेशनको उद्घाटन गर्दै उनले वर्तमान सत्तारूढ नेकपालाई सरकारी कम्युनिस्ट नामको संज्ञा दिए । उनले नेत्रविक्रम चन्द, मोहन विक्रम सिंह, गोपाल किराँती लगायतलाई एकीकरणको […]
काठमाडौं, चैत । पार्टीको तल्लो तहको एकीकरण टुंग्याउन नसकेको सत्तारुढ नेकपाले प्रदेश स्तरको कमिटिलाई पूर्णता दिएको छ । कमिटिलाई पूर्णता दिएसँगै उसले प्रदेश स्तरिय बैठक पनि सम्पन्न गरेको छ । यसै क्रममा प्रदेश ३ का सदस्यहरुलाई यहि चैत १४ गते एक विशेष कार्यक्रमका बीच सपथ खुवाइएको छ । प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष के पी ओलीको […]
काठमाडौं, १५ चैत । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई हदैसम्मको कारबाही गर्न माग गर्दै कांग्रेस कार्यालयमा उजुरी परेको छ । कांग्रेसका महासमिति सदस्य राजेन्द्र बजगाईँले पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा उजुरी दिएका हुन्। सभापति देउवाले बारम्बार पार्टीको हित विपरीत काम गरेको भन्दै पार्टीको केन्द्रीय अनुशासन समितिमा बजगाइँले कारबाहीको माग गर्दै बिहीबार उजुरी दर्ता गरेका हुन्। बजगाईँले उजुरीमा […]
काठमाडौं, १४ चैत । नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको ‘नेकपा’का स्थायी समिति सदस्य हेमन्त प्रकाश ओली ‘सुदर्शन’लाई रिहा गर्न माग गर्दै उनकी छोरी विपना ओलीले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएकी छिन् । काभ्रेबाट ९ जनासहित पक्राउ गरिएका ओलीलाई उपस्थित गराई थुनामुक्त गराउन छोरी विपना ओलीले बुधबार सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट दर्ता गरेकी हुन् । हेमन्त ओली, […]
काठमाडौं, १४ चैत । गणतन्त्र नेपालका प्रथम प्रधानमन्त्री एवम् सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्ड श्रीमती सीता दाहालको स्वास्थ्योपचार पश्चात अमेरिकाबाट आज स्वदेश फर्कँदै हुनुहुन्छ । श्रीमती सिता दाहालको स्वास्थ्यमा सुधार आएपछि १० दिने अमेरिकी भ्रमणबाट आज अध्यक्ष प्रचण्डसहित उनका परिवार स्वदेश फर्किन लागेको हो । अमेरिकामा श्रीमती सीता दाहालको एचयनचभककष्खभ क्गउचबलगअभिबच एबकिथ ९एक्ए० रोगको […]
थप समस्यामा राजपा : महाधिवेशन बैसाखमा गर्न सक्ला ?
काठमाडौं, १२ चैत । मधेश केन्द्रीत राजनीतिमा अग्रसर राष्ट्रिय जनता पार्टीले आगामी बैसिाख ७ देखि ९ सम्म महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको थियो । समय नजिकीँदै जाँदा राजपाले तोकिएको समयमा महाधिवेशन गर्न सक्ला की नसक्ला भन्ने प्रश्न खडा भएको छ । आफ्ना नेता तथा सांसद रेशम चौधरीलाई जन्म कैदको फैसला सुनाइएपछि आक्रोसित बनेको राजपाले सरकारलाई दिएको […]
काठमाडौं , १० चैत – नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपा समस्यामा परेकाे छ । अाफ्ना नेता कार्यकर्ताहरू धमाधम राजधानी र अासपासबाट पक्राउ पर्न थालेपछि समस्या बढेकाे हाे । उक्त पार्टीका उच्च नेता हेमन्त प्रकाश अाेली काभ्रेबाट पक्राउ परेपछि अब के हुने भन्नेमा समस्या पैदा भएको हाे । त्सैगरी विप्लवका अति विश्वासपात्र मानिएका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा […]